Vaovao - Avy amin'ny "mpandray vola" ka hatramin'ny mpandraharaha, Liu Jianhong ao amin'ny Xueruisha Group dia lehilahy manana tantara
Avy amin'ny "profiteer" ka hatramin'ny mpandraharaha, Liu Jianhong ao amin'ny Xueruisha Group dia lehilahy manana tantara
Fikirizana sy fikatsahana mpisava lalana
Lehilahy manana tantara ity. Miaraka amin'ny fikirizana mafy, ny toe-tsaina tsy milefitra ary ny fikatsahana saika mafy loha, ny lalana eo ambanin'ny tongony dia feno fanantenana foana, ary mandroso amin'ny alàlan'ny fihodinana ... Ny olona mihinana foza, na eo aza izany, amin'ny famakafakana voalanjalanja sy ny fitsarany marina, nankafiziny manokana ny anjarany isaky ny. Avy amin'izany, izy sy ny ekipany fitantanana dia namorona tamim-pitandremana-Baoding Xueruisha Down Products Co., Ltd. no lasa orinasa voalohany voatanisa ao Baoding nidina tao amin'ny birao Shijiazhuang City.
Ny fahendrena, ny fahatoniana ary ny fahatsorana no fahatsapan'ny mpanao gazety an'i Liu Jianhong. Ny fihetsika rehetra dia manambara fihetsika voadio. Ny solomaso roa eo amin'ny teteon'ny orona, ny teny voatonona, ny tsiky eo amin'ny tarehiny, ary ny fiteny mitombina sy mazava no mahatonga ny olona hahatsapa momba ity orinasa tsy miankina ity. Tsy vitan'ny mpandraharaha ny mankasitraka sy manaja. Nanjary nazava tsikelikely ny sarin'ny mpandraharaha Confucianianina mahazatra rehefa nandroso ny dinidinika.
Miaraka amin'ny nofy, lehiben'ny mpandraharaha
Tamin'ny 1973, Liu Jianhong dia teraka tao amin'ny fianakavian'ny mpanjono iray tao amin'ny Village Dazhangzhuang, Baiyangdian, County Anxin. Tamin'ny taona 1990 dia niditra an-tsekoly tany amin'ny lise izy noho ny fahasahiranana ara-bola tao an-trano ary nilaozany ny fianarany. Rehefa avy nandao ny fianarany i Liu Jianhong dia nankany amin'ny orinasa iray any Anxin County mba hiasa amin'ny asan'ny mpiasa volon'ondry. Asa mafy sy mandreraka ny fikolokoloana volo. Liu Jianhong dia tsy nihakamoana na nilalao malama. Nifoha maraina izy ary niarahaba ny maizina ary niasa mafy. Nahazo haingana ny fankasitrahana sy fitokian'ny mpitantana ny orinasa izy. , Nentina ho mpitan-kaonty izy tao anatin'ny antsasak'adiny latsaka.
Tamin'ny 1992, niaraka tamin'ny vola 20 000 yuan nitehirizany tamin'ny asa an-tselika sy ny nofinofy hananganana orinasa dia niara-niasa tamin'ny namany handeha atsimo ho any Guigang City, Guangxi izy ary nanomboka varotra varotra sy fivarotana sarimihetsika. Taorian'ny asa mafy nandritra ny telo taona, tamin'ny 1995, Liu Jianhong, 22 taona, dia nanana renivohitra an-tapitrisany, ary izy no tompon'ny zandriny indrindra tao amin'ny Village Dazhangzhuang avy amin'ny fianakaviana mahantra. Niantehitra tamin'ny asa mafy sy fahazotoana handavaka ilay "vilany volamena voalohany" izy.
Phoenix nirvana, mitsangàna indray
Raha nampiditra loharanom-bola i Liu Jianhong ary niomana hanatsara ny asany, dia mbola nisy fihemorana lehibe kokoa noho izany. Tamin'ny 1996, noho izy naniry fatratra ny hahita fahombiazana. Vola iray no nampanjariam-bola tsy am-piheverana, ary vola mitentina iray tapitrisa yuan nangonina tamina asa mafy no natsipy nandritra ny alina. Mba hahatafita velona, ​​dia nivarotra barbecue teny an-dalana i Liu Jianhong mivady. Niasa mafy nandritra ny herintaona izy mivady ary nitahiry 20 000 yuan. Tamin'ny 1997, Liu Jianhong dia nitondra ilay 20000 yuan tao am-paosiny ary lasa nankany Guangxi indray mba hitady fotoana mety amin'ny orinasa amin'ny nofinofiny manokana. Rehefa afaka 5 taona, ny vidiny mitovy dia 20.000 yuan, ary nandeha tany amin'io toerana io indray aho. Liu Jianhong dia feno fihetsem-po, fa tsy toy ny tamin'ny farany, manana traikefa sy fahatokisana bebe kokoa izy. Ny fientanentanan'ny mpandraharaha dia matanjaka kokoa ary maniry bebe kokoa amin'ny nofinofiny izy. Ny fikirizana dia maharitra kokoa, ary miaraka amin'izay koa dia be herim-po sy mazoto kokoa ary matotra sy marin-toerana kokoa noho ny dimy taona lasa.
Nandritra ny fikarohana mafy nataony dia tsy nahy hitan'i Liu Jianhong fa ny trano famonoana omby eto dia nanangona fitaovana fako sasany izay namboarin'ireo sombin-gana. Ilay efa za-draharaha dia hitany indray mipi-maso fa misy ireo volon'ondry ireo. Noheveriny fa raha afaka manavaka ny volo izy dia mety mbola hahazo vola. Noho izany, nandany maherin'ny 20.000 yuan izy mba handefasana fako maherin'ny 30.000 ary nentiny nody. Rehefa avy niady nandritra ny andro sy alina maromaro dia nanasaraka volon'ondry maherin'ny 10.000 izy ary nahazo tombony maherin'ny 200.000 yuan. Ny rivotra sy ny orana, ny lohataona sy ny fararano, ny rivotra, ny fanala, ny lanezy ary ny orana no nandresy ny riandrano. Nandritra ny taona maro, Liu Jianhong dia nanangona renivohitra iray.
Ny fanaovana akora tsotra fotsiny dia mety "profiteer" fa tsy mpandraharaha. Tamin'ny taona 1999, Liu Jianhong dia nisoratra anarana ny Jinlida Down Products Factory, nisoratra anarana ny marika, ary niditra tamin'ny fomba ofisialy ny sehatry ny famokarana vokatra. Nidina an-tsena nandritra ny volana maromaro izy, nandinika tsara ny tsena, ary namolavola drafitra famokarana vokatra sy marketing. Mikasika ny filozofia momba ny orinasa dia nanizingizina hatrany izahay ny "handresy ny mpanjifa tsy mivadika ary hampivelatra ny tsena amin'ny fahendrena". Eo amin'ny fitantanana orinasa dia nanamafy hatrany izy fa "ny siansa sy ny teknolojia no hery mpamokatra voalohany". Teo ambany fitarihan'i Liu Jianhong, namokatra duvets andiany voalohany ilay orinasa ary nampiroborobo sy nivarotra izany tamin'ny alàlan'ny fantsona maro samihafa. Tamin'ny ririnin'ny taona 2000 dia nanana fivarotana franchise mihoatra ny 50, magazay fivarotana mihoatra ny 20, ary ozinina any amin'ny tanàna sy faritra maro any amin'ny faritra avaratra. Ny orinasa dia feno fahavelomana sy fahavelomana. Rehefa mivoatra ny orinasa dia tsy mitsahatra mieritreritra an'izany izy: Raha te ho lehibe dia tsy maintsy mijery ny tsena sy izao tontolo izao ny orinasa.
Fampandrosoana mitohy, mankany amin'ny ambaratonga avo kokoa
Ny sombinà volom-borona kely dia tsy misy atiny teknika ambany. Liu Jianhong dia nitarika ny orinasa hanitrikitrika ny hamokatra amin'ny fomba henjana mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Vantany vao nivoaka ireo vokatra nidina dia noraisin'ireo mpanjifa izy ireo ary nahazo ny "National National Product", "Hebei Famous Brand", "Hebei Famous Brand", ary "Consumer". Ireo izay afaka matoky ny vokatra "," kaonty iray azo itokisana sy azo itokisana "ary loka hafa. Ny fampivelarana ireo vokatra midina, ny fananganana marika ambany ary ny fampiroboroboana ny kolontsain'ny orinasa dia lasa olana stratejika eritreretin'i Liu Jianhong sy ny ekipany Tamin'ny fahatongavan'ny vanim-potoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ny Internet, Liu Jianhong dia niara-nifanaraka tamin'ny fotoana, nanangona fampahalalana bebe kokoa momba ny tsena tamin'ny alàlan'ny Internet, nivarotra ireo vokatra isan-karazany tamin'ny orinasa an-tserasera, nandefa baiko sy varotra manerana ny firenena, ary nitombo 50% ny varotra.
Tamin'ny 2003, Liu Jianhong dia nanova tamin'ny fomba ofisialy ny anaran'ny Jinlida Down Products Factory ho an'ny Anxin County Liteshu Down Products Co., Ltd., ary nanitatra ireo karazan-vokatra teo ambanin'ny marika "Liteshu", nanomboka tamin'ny duvet iray tany am-boalohany ka hatrany amin'ny kitapo fatoriana, Many vokatra toy ny palitao nidina ary ny ondana. Tamin'ny 2005, "Liteshu" dia nandalo ny fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena ISO9001: 2000. Nahazo fitokisana tamina kalitao i "Liteshu", nahazo baiko marobe ary nanomboka niditra tamin'ny tsena iraisam-pirenena. Nahatratra 100 000 mahery ny varotra vokarin'ny orinasa tamin'io taona io, ary nihoatra ny 50 tapitrisa yuan ny sandan'ny vokatra. Tamin'ny taona 2006, ny orinasa "Liteshu" sy France Saint Laurent • Xueruisha (International) Garment Co., Ltd. dia nikambana tamin'ny fisoratana anarana sy ny fananganana Baoding Xueruisha Down Products Co., Ltd., ary nandefa ny andiam-pamokarana marika "Xueruisha". Tamin'ny taona 2009, nandany vola be izy hamoronana ny marika famantarana "Edelweiss" malaza, ny tampon'ny Xueruisha. Ny vokatra dia amidy amina tanàna lehibe sy antonony am-polony toa an'i Beijing, Tianjin, Shanghai, Chongqing, sns., Ary eo amin'ny faritra avo amin'ny fizahan-tany amin'ny ririnina any Eropa sy Amerika, ary tian'ny mpanjifa any amin'ireo firenena sy faritra ireo. Tamin'ny 2010, Xueruisha dia nanam-bola be tamin'ny fifanarahana orinasa lehibe dimy tany Shandong, miaraka amina famokarana volom-borona 190,000 isan'andro, ary namorona lamina fiasa iray sy fijanonana ary indostrialy iray. Tamin'ny 27 Mey 2014, Xueruisha Down Products Co., Ltd. dia voatanisa tamim-pahombiazana ho orinasa voalohany tao Baoding tonga tany amin'ny birao lehibe ao Shijiazhuang City. Tao anatin'izay 20 taona lasa izay, Xueruisha Down Products Co., Ltd. dia nividy, nanodina ary nivarotra volom-borona efa ho 50 000 taonina; namokatra sy nivarotra vokatra 2,2 tapitrisa nidina. Ireo rehetra ireo dia mahatonga an'i Liu Jianhong feno fahatokisana amin'ny fampandrosoana ho avy ny orinasa.
Liu Jianhong dia nanolotra fa ny orinasa dia nanangana tsena any ivelany ho an'ny vokatra palitao nidina, ary ny orinasany any ivelany dia nitohy mandraka androany, ary manana fifandraisana amin'ny orinasa maherin'ny 10! Amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny vokatra ho an'ny mpanjifa vahiny, ny mpamorona ny orinasa dia manana fampahalalana marobe momba ny fironana lamaody eropeana sy amerikanina, ary tsy tokony hatao ambanin-javatra ny hatsaran-tarehin'izy ireo, izay mifanindran-kevitra amin'ny fanjifana lamaody maodely an'ny mpanjifa ao an-trano. Ny pitsopitsony rehetra dia voadio tsy misy kilema. "Fa ny ravina latsaka dia tsy maintsy miverina amin'ny fakany. Na firy na firy ny tsena fantatry ny tsena aty ivelany antsika, raha tsy afaka manangona fitaomana marika eo amin'ireo mpanjifa ao an-trano isika, dia tsy afaka ny ho marika nasionaly akory." Liu Jianhong mieritreritra.
Hatramin'ny 2013, ny Governemanta Anxin County dia nanitsy tanteraka ny indostria nidina. Liu Jianhong no nitarika ny fananganana toeram-pitsaboana fanadiovana tatatra mba hahatratrarana ny fenitra famoahana rano. Mandritra izany fotoana izany, mba hisorohana ny fandotoana ny rivotra, ny boiler mirehitra dia navadika ho arina ka lasa may. gazy voajanahary.
Tamin'ny 2015, Xueruisha Group dia nisoratra anarana ho Hebei Rongdu Electronic Commerce Co., Ltd., ary nanangana sehatra fivarotana an-tserasera sy raharaham-barotra amin'ny Bohai Commodity Exchange, ary nanangana trano fitahirizana entana lehibe any avaratra, nanolo-tena hampiray ny fenitra ambany .
Mifandraisa amin'ny distrika vaovao, manovà ary manavao
Tamin'ny 1 aprily, tonga ny vaovao momba ny fananganana ny Distrikan'i Xiong'an Vaovao. Amin'ny maha mpandraharaha tantsaha izay niasa mafy hatrany ambany, Liu Jianhong dia tena faly tamin'ny fahafaha-mampandroso any amin'ny tanàna nahaterahany, ary mandritra izany fotoana izany dia nieritreritra lalina ny amin'ny fandraisana anjara amin'ny fananganana ny distrika vaovao izy.
Amin'ny maha talen'ny efitrano fivarotana indostrialy Hebei Down, Liu Jianhong dia nanambara fa hanohana tanteraka ny fananganana ny distrika vaovao izy ary handray andraikitra amin'ny fanarahana ny fanapahan-kevitry ny distrika vaovao. Mandritra izany fotoana izany, mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny distrika vaovao, miampy ny toetran'ny distrika vaovao, dia hiezaka izahay hiomana amin'ny fanovana sy fanavaozana ny orinasa. Ny voalohany dia ny manohy manitatra ny efitrano fampirantiana, manao asa tsara amin'ny fizahan-tany indostrialy, ary manitatra ny varotra vokatra midina sady mampiroborobo an'i Baiyangdian sy ny faritra vaovao; ny faharoa dia miankina amin'ny ho avy teknolojia avo lenta sy tombony lehibe ho an'ny faritra vaovao hananganana fikarohana sy fampandrosoana teknolojia avo lenta sy vokatra. Miantehitra amin'ny tombony azo avy amin'ny angon-drakitra lehibe hananganana sehatra ho avy sy hahita sehatra fivarotana an-tserasera ho an'ny vokatra midina. Avelao ny distrika vaovao tsy hanana fidinana sy famokarana vokatra, fa ny sehatra fivarotana tambajotra ao amin'ny distrika vaovao dia hahatsapa ny fanovana sy fanavaozana azy manokana, ary hahafahan'ny orinasa miditra ao amin'ny fananganana sy ny fampandrosoana ny distrika vaovao ihany koa, tsy hofoanan'ny ny fotoana, ary hijoro amin'ny fironana.
Manàna fahasahiana handray andraikitra ary handray anjara bebe kokoa
Liu Jianhong dia mino hatrany fa, ankoatry ny ezaky ny tenany mitaingina ny rivotra sy ny onja, ary ny fisondrotan'ny fiakarana, Xueruisha Down Products Co., Ltd. dia tompon'andraikitra bebe kokoa amin'ny fitarihana ny indostria midina mba ho salama kokoa sy avo lenta kokoa. ary ny làlan'ny fampandrosoana. Miaraka amin'ny hafanam-pony, manana fahasahiana izy manandrana sy manavao, ary manankarena hatrany ny tenany, hanome ny heriny ho an'ny orinasa, ny mpiasa ary ny olona eo an-toerana. Ny firoboroboan'ny orinasa dia nitondra azy amam-boninahitra maro: "Mpiasa modely ho an'ny indostrian'ny lamba nasionaly", "Mpandraharaha tsara", "filoha lefitry ny fikambanan'ny indostria China Down", "orinasa miavaka ao amin'ny indostria china down", "chambre Hebei Down industri "Commerce" lava ". Amin'ny maha-mpitarika indostrialy azy dia nandray anjara mavitrika tamin'ny famolavolana ny fenitra ambany an'ny Fikambanan'ny Indostria China Down, ary nitazona ireo orinasa tamin'ny fananganana fotodrafitrasa fanaraha-maso ny fandotoana tamin'ny fanavaozana ny indostrian'ny indostrialy. tato ho ato taona maro, nanolotra yuan maherin'ny 2 tapitrisa ho an'ny fiarahamonina ny orinasa ary nanome palitao miisa 10.000 mahery. Nomena ny anaram-boninahitra "Advanced Individual" avy amin'ny Governemantam-bahoaka Hebei ho an'ny fanabeazana sy ny "Charity Enterprise" avy amin'ny Anxin Federasiona fiantrana County.
Ny fanavaozana no lohahevitra maharitra amin'ny fampandrosoana ny orinasa sy ny fanahin'ny orinasa. Ny paikady ifotony sy ny fotokevitra ifotoran'ny fitantanana orinasa Liu Jianhong dia niforona manodidina ny teny hoe "fanavaozana". Manana ny fahaizany manokana momba ny "fanavaozana" izy: ny fieritreretana izay tsy noeritreretin'ny hafa dia antsoina hoe fanavaozana, ny fanaovan-javatra izay tsy vitan'ny sasany dia antsoina hoe fanavaozana; ny zavatra sasany dia antsoina hoe fanavaozana satria manatsara ny kalitaon'ny asa sy ny fiainana, ny sasany satria manatsara ny fahombiazan'ny asa, ary ny sasany satria manamafy ny toerana ifaninanana. Saingy ny fanavaozana dia tsy voatery ho karazana zava-baovao, fa azo afangaro amin'ny endrika vaovao ihany koa. Ny fonosana zavatra taloha dia antsoina hoe fanavaozana, ary ny fanomezana teboka vaovao amin'ny zavatra taloha dia antsoina koa hoe fanavaozana; Ny fanovana ny habetsany tsy misy fanovana ny firafitra dia antsoina hoe fanavaozana, ary ny fanovana ny habetsany tsy misy fanovana ny rafitra dia antsoina hoe fanavaozana.
Izany indrindra dia noho ny "fanavaozana" mitohy izay nitomboan'ny orinasany isan'andro, ary koa noho ny "fanavaozana" no nahatonga an'i Xueruisha Down Products Co., Ltd. niroso tamin'ny voninahitra. Nandritra ny folo taona mahery ny fanavaozana maharitra, mihoatra ny folo Miaraka amin'ny fikarohana tsy manam-paharoa, Liu Jianhong sy ny ekipany fitantanana dia nifikitra hatrany amin'ny filozofia momba ny "fampandrosoana vaovao, ny fahamarinana ary ny fahitsiana", izay nahazo ny fankatoavana ny mpanjifa sy ny fanamafisana ny sehatra rehetra eo amin'ny fiarahamonina.